China Power Fitting-Pole band fanamboarana sy orinasa | XY Tower
Ny fittings herinaratra dia karazana kojakoja rehetra izay ampiasaina hampifandraisana na hanohanana ny fitaovana elektrika mba hahatsapan'ny tsipika poloney ny famoahana herinaratra. Ny fametahana herinaratra dia antsoina koa hoe kojakoja andalana herinaratra, fantsom-pamokarana herinaratra, fametahana herinaratra, fametahana herinaratra elektrika. Fittings herinaratra manana ny endri-javatra toy ny etsy ambany ：
• Hery lehibe mamaky entana
• Habeny marina
• Maharitra amin'ny kalitao
Ny fametahana herinaratra dia natao araka ny takian'ny tsena isan-karazany. Isaky ny tsena dia misy ny fenitra misy azy. XY Towers dia mahafantatra ny fenitry ny tsena samihafa.
vita: Mandroboka mafana
Fonosana: Baoritra sy paleta na mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa
Fe-potoana ara-barotra: T / T 30% toy ny fandoavam-bola mialoha sy 70% T / T alohan'ny handefasana ny tarika pol
endri-javatra: Ny fantson-tsipika offset dia ampiasaina amin'ny famonoana, fametahana ary fampidirana ambaratonga faharoa amin'ny tsato-by vy, fantsom-by.
Ny tombony: 1.Fandefasana haingana
3. fanompoana tsara
Fanamarihana: Azonao atao ny misafidy mivantana ny karazana mety araka ny haben'ny sary.
Ny fehin-kibo dia ampiasaina hamonosana ny tsato-kazo, izy io dia antsoina koa hoe fastener pol, clamp fastening polt, poltant clamp, bracket pol. Araka ny firafitra, ny tarika am-polony dia misy fantsona tokana offset sy tarika offset roa.
Araka ny fangatahana dia misy fantsom-tsato-kazo ilaina, fonosana tsato-kazo an-tariby, ary fantsom-pifandraisana. Azo ampiasaina miaraka amin'ny clamp fastening poloney guy tariby. Ny tariby tariby dia azo ampiasaina matetika hampifandray ny tariby ADSS sy OPGW. Misy tongotra lava manitatra amin'ny fantsom-polba iray. Ny lavaka amin'ny tongotra maharitra dia mampifandray ny ZH clevis, U clevis.
Ny fehin-kazo dia natao hamboarina amin'ny tsato-kazo ambonyaton'ny hazo 150mm ka hatramin'ny 280mm. Izahay dia nanome savaivony 155mm, 185mm, 230mm, sns.
Ny tarika poloney dia manana tanjaka fihenjanana mijanona tsy mihoatra ny 29kn. Na dia ho hafa aza ny valiny raha toa ka misy tambazotra ahazoana fitaovana na fitaovana hafa hampiasaina hamindrana ny tadin'ny tadidy avy amin'ny bolt polt.
Ny akora XY Tower amin'ny fantsom-bokatra dia vy vy karbaona, tsy vy vy. Ny akora dia malefaka ary malefaka be. Ny tanjaky ny vy vy dia hatramin'ny 560N / MM2. Miaraka amin'ny fisafidianana hentitra ireo akora dia tsy hisy ny triatra na triatra amin'ny fantsom-by, aorian'ny fanaovana hajia amin'ny vy fisaka.
Ny famaranana ny tarika poltantsika dia milentika mafana araka ny ISO 1461.
Ho an'ny savaivony sy voltage isan-karazany, misy habe samihafa ho an'ny clamp polt pol. Ny XY Tower dia afaka manao ny fatotra poloney arakaraka ny volavolanao. Inona no andrasanao, mandefasa fanadihadiana izao.
Previous: tadivavarana indroa miampita tilikambo renirano